Home Wararka Mustafe Cagjar oo si weyn u soo dhoweeyay Go’aankIi Golaha Wasiirada
Mustafe Cagjar oo si weyn u soo dhoweeyay Go’aankIi Golaha Wasiirada
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Mustafe Muxumed Cumar ayaa si weyn u soo dhaweeyey, go’aankii golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay maanta ururka ONLF uga saareen liiska argagixisada.
Wuxuu sheegay in Go’aanka lagu dhiibay Qalbi-dhagax, ururkii ONLF-na loogu aqoonsaday argagixiso uu ahaa ficil argagax galiyay shacabkii dulmanaa ee Deegaanka Soomaalida, xad-gudubna Soomaalinimada iyo ka islaanimada.
Hoos ka akhriso Qoraalka Mustafe Cagjar:
Waxaan si wayn u soo dhawaynayaa go’aanka Golaha Fulinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku buriyeen go’aan hore oo ururka ONLF loogu aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso ah, gacan cadawna lagu galiyay halgamaa Abdikarim Sheikh Muuse (Qalbidhagax).
Go’aankaas hore wuxuu ahaa ficil argagax galiyay shacabkii dulmanaa ee Deegaanka Soomaalida, xad-gudubna ku ahaa dhaqanka dawladnimo, ka Soomaalinimo iyo ka islaanimaba.
Waxaa kale oo aan dhaleeceeynaynaa ficiladii lamidka ahaa ee Deegaano kale oo Soomaaliyeed cadaw ugu soo gacan-geliyeen halgamayaal Soomaaliyeed oo diidaanaa tacadigii lagu hayay dadkooda.
Waxaan rajaynayaa in taariikhdaas madow ee uur-ku-taaladda leh, xiligii ay dhacaysayna aan dhaleeceeynay, cashir iyo cibro-qaadasho u noqoto cid walba oo xadgudbkaas samaysay.
Previous articleFahadow Ninkii Xumaan Falaa Waa inuu Xuman Fishaa.
Next articleMaanta Somalida Waddaniyiinta ah waa Faraxsan yihiin Somalidiidna Asaay ayaa u Saarantay.
Breaking News: Ciidankii Erateriya ay Rahaamadda u Haysatay oo uu Farmajo...